”Maad xustid Soomaalidii kuusoo gurmatey?!” – Dadwaynaha Somaliland oo ka caroodey mahadcelin uu Biixi la doontay Abiy Ahmed | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Maad xustid Soomaalidii kuusoo gurmatey?!” – Dadwaynaha Somaliland oo ka caroodey mahadcelin...
”Maad xustid Soomaalidii kuusoo gurmatey?!” – Dadwaynaha Somaliland oo ka caroodey mahadcelin uu Biixi la doontay Abiy Ahmed
(Hargaysa) 02 Abriil 2022 – Waxaa haatan weli soconaya dab xooggan oo ku dhuftay Suuqa Waaheen ee magaalada Hargaysa, kaasoo ay goobjooggu sheegeen inuu kacay abbaarihii 6:30 maqribnimo iyadoo uu dabku ka kacay bakhaar ku yaalla suuqa, iyadoo ay dabka sii qaadeen xarkaha korontadu.
Dad badan oo halkaa ku hanti beelay ayaa iyaga oo niyad jabsan ka sheekeeyey dhibaatada lasoo gudboonaatey ee dabka cunay inta badan suuqa oo aan wax badan laga gaarin iyo dhismayaashii waawaynaa ee dabaqyada ahaa oo iyaguna burburay.
Waxaa dabka oo ka xoog badiyey cududda Dab-damiska Maxalliga ah ee Hargaysa looga soo gurmadey meelo fog fog sida Xarunta Gobolka Soomaalida ee Jigjiga, kuwaasoo ka qayb qaatay daminta dabka.
Haddaba, RW Itoobiya ee Abiy Ahmed ayaa farriin kooban soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Facebook taasoo uu uga hadlayo baaba’a uu dabkani ka gaystey suuqa Hargaysa, isagoo weliba af Soomaali adeegsanaya.
”Waxaan aad uga naxay, kana tiiraanyooday dabka ka kacay Suuqwaynaha badhtamaha Hargeysa, kaas oo khasaare ballaadhan u geystay hantidii Shacabka. Hadda lama qiyaasi karo Khasaarahaas.
”Waxaannu Shacabka Somaliland la qaybsanaynaa murugada dhibkaas ku yimid. Waxaannu u sheegaynaa inaannu garab taagannahay Waqtigan aad ka u adag. Waxaanu Eebbe ka rajaynaynaa inuu Khasaarahaas dheef ugu beddelo xilligan aannu ku jirno Bisha barakaysan ee Ramadaan. Eebbe ayaa inna leh, xaggiisana ayaynu u noqonaynaa.” ayuu yiri Ahmed.
Waxaa haddaba warkiisa isna ka fal-celiyey oo sii faafiyey MW Somaliland ee Muuse Biixi oo yiri: ”Mahadsanid mudane Ra’iisal Wasaare, waxa aan kaaga mahad-celinayaa adiga, shacabka iyo dowladda Itoobiya sida wanaagsan ee walaaltinimada leh ee aad noogu soo gurmateen wakthigan adag.Shacabka jamhuuriyadda Somaliland wey xasuusnaan doonaan garab istaagiinnan.”
Dadwayne badan oo ka jawaabey faafinta iyo faallada dambe ee Biixi ayaase ku dhaliilay in uu sidoo kale xuso madaxda kale ee Soomaaliyeed ee gurmadka jireed iyo midka niyadeed gaysatey sida madaxda Somalia iyo kuwa Gobolka Soomaalida ee dab-damisyada usoo diray.
”Muosow Abiye waa laga horreeyay hadal iyo kala sokaynba e maad Soomaali Maxamed mahadsanidiin walaalayaalow tiraahdid Abiya ha na aad dambaysiisid,” ayay waydiisey Hoodo Cabdi.
”Madaxda Soomaalidu dhamaantood way kuu tiiraanyoodeen sabab aad iyaga ugu mahadcelin weydey maxay tahay? Hadii ay siyaasadi jirto ugu mahadceli sidii laba dal oo daris ah ee jooji siyaasadan guunka ah ee gabowdey waxna ka bedel hab-dhaqanka dowladahaa jaarka ee walaaltinnimadu inaga dhaxayso Amxaar hanoo hor boodine,” ayuu soo qoray Cabdi Waddani.
”Itoobiya wali waxba inoomaytarin shacabka soomaaliyeed ee degaanka ayaa innooso gurmadey Dr Abiy hadday daacad katahy diyaaradihii Helicopters-ka ahaa ha inoo soo diro.” ayuu soo jeediyey Cabdiqani Deeq.
Previous articleWeriyaha ruug caddaaga ah ee C/laahi Xaaji oo la waysan yahay (Halkan kala xiriir ehelka)
Next articleGAR-QAAD: Laba sababood oo looga gar daran yahay Fahad Yaasiin & arrin aan la gorfayn